Arduino နဲ့လိမ်ရှာဖွေရေးကိရိယာလုပ်နည်း | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများကိုဖန်တီးရန်အဆိုပြုချက်များနှင့်အတူဤတစ်ကြိမ်တွင်သင်မည်သို့တင်ပြလိုသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မုသားရှာဖွေရေးကိရိယာကိုဖန်တီးပါ ကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်သင်၏ guests ည့်သည်အားလုံးကိုနှုတ်ဖြင့်ဖွင့်ရန်။ ဒီ post ရဲ့ခေါင်းစဉ်အရဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Arduino ဘုတ်အဖွဲ့ကိုသုံးမယ်။ ဒီတစ်ခုလုံးက controller တစ်ခုလုံးအတွက်ထိန်းချုပ်တယ်။
ဤစီမံကိန်းတွင်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိစက်ကိရိယာများမည်သို့နက်ရှိုင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့အားသိရန်ကူညီလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်မတူကွဲပြားသောတုံ့ပြန်မှုများ သင်တွေ့သည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်မေးနိုင်သောမေးခွန်းပေါ် မူတည်၍ သင်ခံစားနေရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုမူတည်သည်။
သင်၏မုသားရှာဖွေစက်ကိုသင်စတင်တည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုအဘယ်ကြောင့်အချို့သောနည်းလမ်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ချိတ်ဆက်နေသည်၊ အထူးသဖြင့်အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်စေသည့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုဤနည်းဖြင့်ပရိုဂရမ်ရေးသားထားသည်ကိုနားလည်ရန်သင်ပိုမိုလွယ်ကူမည်မှာသေချာသည်။ ထိုအခါသင်သေချာပေါက်ကြိုးစားချင်သောစိတ်ကြိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလာလိမ့်မည် သင်လိုအပ်နိုင်သမျှလိုအပ်ချက်များအတွက်စီမံကိန်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ.
ဤစီမံကိန်းကိုအခြေခံသည့်အယူအဆသည်အောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်အခြေအနေကိုတိုင်းတာသည်။ မုသားရှာဖွေရေးကိရိယာ၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၄ င်းတို့ကိုပထမအကြိမ်တွင်အခြေပြုထားခြင်းဖြစ်သည် အများအပြားပြည်နယ်များပေါ်မူတည်။ အရေပြားကူးပြောင်းပြောင်းလဲစေပါသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောစိတ်အခြေအနေမည်သို့ရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေစီးဆင်းမှုကိုဤခြားနားချက်ကို Electrodermal Activity ဟုခေါ်သည်။ (ဒီအကြောင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်) အသားအရေ၏ဒီဂုဏ်သတ္တိကြောင့် Arduino နှင့်တိကျသောဆော့ဝဲလ်အကူအညီဖြင့်ဂရပ်ဖစ်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အရေပြား၏စီးဆင်းမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအပြောင်းအလဲများအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောမှားယွင်းမှုရှာဖွေစက်နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် hardware ၏ရှေ့မှောက်၌မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုထိုင်လျက်အာရုံခံကိရိယာများကို ဆက်သွယ်၍ လွယ်ကူသောမေးခွန်းများဖြေခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ဒါကိုခေါ်သကဲ့သို့'or'သင်ဘယ်မှာနေသလဲ?' ဤမေးခွန်းများ ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းလိုသည့်အကြောင်းအရာ၏အခြေအနေကိုသိရှိရန်၎င်းတို့သည်အခြေခံအနေနှင့်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏လိမ်နေခြင်းသို့မဟုတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့်နဗ်ကြောဖွဲ့နိုင်သောကြောင့်မတူညီသောမေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤစီမံကိန်းအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ခြားနားချက်များကိုသိရှိရန်နှင့်အချက်အလက်များကိုကွန်ပျူတာသို့ပေးပို့ရန်အတွက် microcontroller ကိုအသုံးပြုရမည်။ ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကဒီ microcontroller ဆီကအချက်အလက်တွေကိုလက်ခံရရှိဖို့၊ ကအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေးချစ်ပ်တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည် ဥပမာအားဖြင့် Arduino Mini or Adafruit ဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ဗားရှင်းတွေမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုနိဂုံးချုပ်စေတယ်။ ဤအချက်သည်ဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့် Arduino Nano အစားကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြား microcontroller အမျိုးအစားရှိသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေးချစ်ပ်ရှိနေသရွေ့၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Arduino Nano ပါ
အနီရောင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
10 kOhm ခုခံ
ဤလိုင်းများအထက်တွင်ရှိသောပုံတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်အတိုင်း ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးကိုဝါယာကြိုးသွယ်ခြင်းသည်သင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည် အခြေခံအားဖြင့်တော့သင်ဟာရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်ခြောက်ဆင့်ကိုသာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ် -
Arduino ၏ analog pin သို့အရှည်ဖြင့်ရက်ရောစွာကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ
resistor ကို Ground နှင့် Arduino ၏ analog pin နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဆက်သွယ်ခဲ့သောဝါယာကြိုးနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
ရှည်လျားသောရှည်လျားသောဝါယာကြိုးတစ်ခုကို Arduino ၏5volt pin သို့ဆက်သွယ်ပါ
အစိမ်းရောင်၏ anode (အမြင့်၏ခြေထောက်ရှည်) ကို pin2သို့နှင့် cathode (leg short) ကိုမြေပြင်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။
လိမ္မော်ရောင်၏ anode ကို pin3နှင့် cathode သို့မြေသို့ပို့ပါ
အနီရောင်၏ anode ကို pin4နှင့် cathode သို့မြေသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဤသူသည်သင်တို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်အားလုံးဝါယာကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ နိယာမအားဖြင့်ဘာမျှမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်၎င်းကိုဤကဲ့သို့သောနေရာနှင့်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားရန်လုံလောက်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်မှဖုံးကွယ်ထားပြီး၎င်းကို ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမြင်ပေးနိုင်သည်။
ဘာမှမဖွံ့ဖြိုးမီပင်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုရေးဆွဲရန်နှင့်စုစည်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမည် ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထုတ် Arduino IDE ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းများတွင်မော်နီတာနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့်ဤဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ပုံစံသည်ထင်ရှားသည့်အမှတ်စဉ်မော်နီတာကိုအသုံးပြုမည့်အစားအမှတ်အသားတပ်ဆင်ထားသည့်အစား၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဂရပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒေတာများကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်စေသည်။ စာသား။
ဒီမော်နီတာကို run ဖို့အတွက် Arduino IDE ကိုဖွင့်ပြီး tools menu ကိုသွားပြီး serial monitor အောက်မှာထားသင့်တယ်။။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်ကကျွန်ုပ်အားဤလိုင်းများအောက်တွင်ထားရှိသောဖိုင်ကိုကူးယူပြီးဖွင့်ပြီးသင်စုစည်းထားသည့်ဖိုင်ကိုသင်၏ဘုတ်အဖွဲ့သို့တင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းသည်လက်တွေ့ကျကျပြီးစီးပါကနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေတင်ပြသည့်စီးဆင်းမှုကိုရှာဖွေရန်တာဝန်ရှိသောကလစ်များဖန်တီးပါ တိကျတဲ့အချိန်မှာ။
ဒီပို့စ်တစ်ခုတည်းမှာပဲပြန့်ကျဲနေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုသင်မြင်နိုင်သလို၊ အလူမီနီယံသတ္တုပါးတစ်ချောင်းကိုအမြန်ချပ်ချပ်၏အောက်ခြေတွင်ကပ်ထားပါ။ ဒါကိုငါတို့အသုံးပြုမယ့်အမြန်နှုန်းနှစ်ထပ်ကိန်း၌လုပ်ဆောင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် strips များကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်ဤမျဉ်းကြောင်းများ၏အထက်တွင်ရှိသောပုံတွင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းအချိန်ရောက်ပြီ ကျွန်ုပ်တို့သည် Arduino ၏ analog pin နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော cable ကို aluminium သတ္တုပါးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်ကိုအတိအကျအတူတူလုပ်ရန်အခြား velcro အပိုင်းနှင့် Arduino current pin နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော cable အား5volt pin သို့လုပ်ရပါမည်။ ဆက်သွယ်မှုများခိုင်မာပြီးအမြန်နှုန်းမြန်နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားရုံဖြင့်အဆက်ပြတ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကိစ္စမှာငါတို့လောင်းမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏မုသားရှာဖွေစက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန်အခြေခံကျသော်လည်းထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်သေတ္တာတစ်မျိုးပြုလုပ်ပါ။ အယူအဆကတော့ velcro ring တွေကိုသိုလှောင်ဖို့အခန်းငယ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအလှည့်တွင် LEDs များကိုမြင်နိုင်ရန်အပေါက်သေးသေးလေးများပါ ၀ င်သင့်သည်။
သင်အမှန်တကယ်စိတ်ကူးကြည့်သည်နှင့်အမျှဤသေတ္တာမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းသည်လိုအပ်သောပစ္စည်းများစာရင်းတွင်ပါသောကတ်ထူပြားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကတ်ထူပြားကနေ ၁၅ x ၃ စင်တီမီတာစတုဂံ ၂ ခု၊ ၁၅ x ၅ စင်တီမီတာစတုဂံ၊ ၄ x ၃ စင်တီမီတာစတုဂံ ၃ ခု၊ ၉ x ၅ စင်တီမီတာစတုဂံနဲ့ ၆ x ၅ စင်တီမီတာစတုဂံတို့ကိုဖြတ်မယ်။
စတုဂံမှန်သမျှကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာနဲ့ 15 x5cm cm ကိုယူမယ်။ 15 x3နှင့်5x3စတုဂံနှစ်ခုကိုအောက်ခြေ၏ကပ်ဘေးတွင်ကပ်ထားလိမ့်မည်။ အခုတော့ဘေးနားကနေ5စင်တီမီတာမှာအခြေစိုက်စခန်းဖို့တတိယ3x6စတုဂံကော်ကပ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာနှစ်ဖက်ခွဲထားတဲ့စတုဂံတစ်ခုက ၆ စင်တီမီတာအရှည်ရှိပြီးနောက်တစ်ခုက ၉ စင်တီမီတာအရှည်ရှိတယ်။။ ၆ စင်တီမီတာအရှည်ရှိသောအခြမ်းမှာအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုနေရာချမည့်နေရာဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူလက်ချောင်းပြားများထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် ၆ x ၅ စင်တီမီတာစတုဂံရှိအပေါက် ၃ ခု၊ LEDs အရွယ်အစားကို ဖြတ်၍ ၆ စင်တီမီတာအကွာတွင်ကပ်ထားသည်။ ၎င်းကို ၉၂ စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှ ၉ x x စင်တီမီတာစတုဂံ၏အတိုချုပ်အားဖြင့်ကော်ကပ်တိပ်ဖြင့်ကပ်ရန်သာကျန်သည်။ ဤနောက်ဆုံးအဆင့်သည်လက်ချောင်းများကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်အပေါ်နှင့်အောက်သို့ရွေ့သွားသည့်အဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထည့်ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားရင်ငါတို့ရှေ့မှာလိမ်ရှာဖွေစက်သေးသေးလေးရှိရမယ်။ သင်စဉ်းစားနေစဉ်၎င်း၏လည်ပတ်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အလွန်တိကျသောမဟုတ်ပါ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မုသားရှာဖွေစက်အများစုတွင်အာရုံခံကိရိယာအမြောက်အများရှိသည်ဥပမာနှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်သူကဲ့သို့အရာဝတ္ထုသည်လိမ်သည်ဖြစ်စေမမှန်သည်ကို ပို၍ သေချာစွာဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino နဲ့လိမ်ရှာဖွေရေးကိရိယာလုပ်နည်း
Ardublock: Arduino အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ
စက်ရုပ်တစ်လုံးလုပ်ရန်နည်းလမ်း ၃ ခု